Fadhiga 7-aad ee Baarlamaanka Somaliya ayaa si rasmi ah u furmay – STAR FM SOMALIA
Waxaa maanta si rasmi ah loo furay Fadhiga 7-aad Baarlamaanka Somaliya, ka dib markii 141 Xildhibaano ay soo xaadirtay kulanka furitaanka Baarlamaanka, iyadoo uu Xarunta Golaha Shacabka ku sugan yahay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya, Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa Madaxweynaha ku soo dhaweeyay Xarunta Golaha Shacabka, waxa uuna warbixin ka siiyay fasixii ay galeen Xildhibaanada iyo hawlaha horyaala Baarlamaanka.
Gudoomiyaha, ayaa sidoo kale microphone-ka ku soo dhaweeyay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, oo Xildhibaanada u jeedinaya khudbadda dastuuriga ee furintaanka Fadhiyada Baarlamaanka.
Sida ku cad qodobka 90-aad ee Dastuurka Somaliya, xarafkiisa (g), Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, ayaa furaya, soona xiraaya Fadhiyada Golaha Shacabka.
Fadhiga 7-aad Baarlamaanka, ayaa socon doono illaa bisha Febraayo ee sanadka 2016-ka, iyadoona bil illaa laba bil ka dibna uu furmi doono Fadhiga 8-aad Baarlamaanka.
Dhanka kale boqolaal ka mid ah Ciidamada Dowladda Somaliya iyo Amisom, ayaa waxaa la soo dhoobay wadooyinka soo gala Xarunta Baarlamaanka, iyagoona si weyn u adkeeyay ammaanka.
Gaadiidka dadweynaha iyo dadka caadiga ah ee doonaaya in ay wadooyinkaasi maraan, ayaa waxaa dib kaga celinaya Ciidamada Dowladda iyo Amisom.